Izicelo ezisi-8 zasimahla zokujonga iselfowuni yakho kwiPC yakho | I-Androidsis
Izicelo ezisi-8 zasimahla zokujonga iselfowuni yakho kwiPC yakho
UIgnacio Lopez | 09/04/2021 22:00 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials
Kubasebenzisi abaninzi, jonga iselfowuni kwiPC ivumela ukuba bandise imveliso, ngakumbi xa kuziwa emsebenzini. Nangona kunjalo, kwabanye abaninzi, yindlela yokuba bakwazi ukusebenzisa usetyenziso olufumaneka kuphela kwiselfowuni, njenge-WhatsApp, kakuhle kwikhompyuter yethu.
Njengoko ubuchwepheshe buqhubele phambili, abasebenzisi baxhomekeke ngakumbi kwi-smartphone, kuba oku kusivumela ukuba senze naliphi na inyathelo esinokuthi silidinge, ukusuka ekuthatheni ifoto, ukurekhoda ividiyo, ukuthumela i-imeyile, ukujonga iiakhawunti zebhanki, ukwenza iifowuni zevidiyo ... kunye neefowuni (ngokucacileyo).
Xa sinxibelelana ne-smartphone yethu ukude, kufuneka siqwalasele ukuba loluphi uhlobo lokusetyenziswa esifuna ukukwenza: sebenzisa usetyenziso kwaye luboniswe kwiscreen okanye ulawule umxholo okhoyo ngaphakathi, ukusukela ayizizo zonke izicelo ezivumela ukuba senze yomibini imisebenzi.
6 Ifowuni yakho yeMicrosoft
Ngeli gama elingenakulinganiswa, sinesicelo esivulekileyo somthombo esivumela ukuba sibonise isikrini se-smartphone yethu kwi-PC kunye IWindows, iLinux, kunye neMacOS.
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo esivumela ukuba sinxibelelane nomxholo okwiskrini, nge-scrcpy ibonisa kuphela okubonwayo kwiscreen, asinakho ukusebenzisa usetyenziso esizifakileyo kwisixhobo esiphathwayo
Esi sicelo silungile ukuba ufuna ukurekhoda iscreen se-smartphone yakho kwiPC Ngaphandle kokufaka nasiphi na isicelo kwi-smartphone. Ukuphela kwento yokuba kufuneka sisebenzise i-Android Debug Bridge (i-ADB) isicelo esinakho khuphela kule khowudi.
Kuya kufuneka sisebenze i-USB Debugging, ngaphambili ivule ukhetho lonjiniyela. Okokugqibela, kufuneka sifake le sicelo ukulandela imiyalelo eneenkcukacha. Unxibelelwano yenziwe ngaphandle kwentambo, Zombini ezi zixhobo kufuneka zixhunywe kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi.
Enkosi kuAllCast, sinokubonakalisa izixhobo zethu zekhompyuter ngokusebenzisa isikhangeli esikrinini sefowuni yethu. Ukuba sifuna ukurekhoda isikrini, kuya kufuneka khuphela usetyenziso kwiwebhusayithi yalo.
I-AllCast ayisivumeli ukuba silawule isixhobo esivela kwi-PC ngokungathi bayasivumela ukuba senze ezinye izicelo, kodwa ukuba injongo kukujonga umxholo kwiscreen esikhudlwana, olu khetho ngokupheleleyo simahla Ingaphezulu ngokwaneleyo.
Ukuba sithetha malunga nokubona iselfowuni kwiPC, nokuba yiWindows, iLinux okanye iMacOS, kufuneka sithethe ngesinye sezona zicelo zisemagqabini kwintengiso: AirDroid. Ngokungafaniyo nezinye izisombululo, xa uqhagamshela i-smartphone yethu kwikhompyuter, ibonisa ujongano lwayo olungenanto yakwenza ne umaleko wobuqu we-smartphone.
Nangona kunjalo, ukuba isivumela ukuba singene kwisicelo ngasinye esisifakileyo kwikhompyuter, ke ukuba sifuna ukusebenzisa i-WhatsApp okanye ezinye usetyenziso zifumaneka kuphela kwi-smartphone, singayenza ngale app.
Unxibelelwano lwenziwa kwifayile ye- ngaphandle kwamacingo nge-IP ye-smartphone, Zombini ezi zixhobo kufuneka zixhunywe kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi.
Akukho sidingo sokufaka nasiphi na isicelo Kwikhompyuter, kuba ukufikelela kwenziwa nangasiphi na isikhangeli, kungena kwi-IP ye-smartphone ethi isetyenziswe yi-AirDroid xa siyifakile kwisixhobo.
Ukufikelela kude kwe-AirDroid kunye nokuhanjiswa kwefayile
Umthuthukisi: ISANDLA STUDIO
I-Mobizen sisicelo esisivumela ukuba sijonge iselfowuni yethu kwi-PC, nangona kunjalo, owona msebenzi uphambili kukwenza shicilela iscreen se-smartphone yethu. Ukwenza oku, kuya kufuneka sifakele usetyenziso kwiselfowuni nakwikhompyuter yeWindows (akukho nguqulelo kwezinye iinkqubo zokusebenza).
Ukongeza ekujongeni isikrini kwi-PC yethu, sinokulawula yonke imixholo egcinwe kwi-smartphone yethu. Isebenza ngaphandle kweengcingo kwi-IP, njenge-AirDroid. Ngaphezulu kwezigidi ezi-3 zabasebenzisi kunye nenqanaba eliphakathi leenkwenkwezi ezi-4,3 vuma esi sicelo simahla.
Ukurekhoda kwesikrini seMobizen
Isicelo esivumela ukuba sijonge iselfowuni kwiPC, ngaphandle kweefrills kwaye iyahambelana nayo IWindows, iMacOS, iLinux kunye nayiphi na isikhangeli yiVysor, sisicelo sasimahla esivumela ukuba siqhagamshele i-smartphone yethu kwiPC ngentambo, njalo akukho lag nantoni na ukuba singafumana kunxibelelwano ngeWi-Fi.
Ukuze usebenzise olu setyenziso, kubalulekile ukuba sisebenzise ukulungiswa kwe-USB ngokhetho lonjiniyela. Ngaxeshanye iqhagamshele i-smartphone nge-USB kwikhompyuter, sivula usetyenziso kwaye ucofe kwiqhosha lokujonga.
IVysor -Ulawulo lwe-Android kwi-PC
Ifowuni yakho yeMicrosoft
Esinye sezona zicelo zibalaseleyo ezikhoyo okwangoku kwimarike ukujonga iscreen se-smartphone yethu kwikhompyuter yethu, ukunxibelelana nayo kunye nokufikelela kuwo wonke umxholo wayo Yifowuni yakho yeMicrosoft, usetyenziso olusebenzisana neselfowuni ye-Samsung, ubuncinci ngaphakathi ubudlelwane no bona isikrini kwikhompyuter yethu.
Ukuba sineselfowuni eyi-Samsung, sinokusebenzisa usetyenziso lwefowuni yakho yeMicrosoft ukulawula isixhobo ngokupheleleyo kwikhompyuter yethu, eyi ivumela ukuba sivule usetyenziso olufakelweyo kwifowuni kwaye unxibelelane nabo ngaphandle kokuchukumisa i-smartphone.
Ukuba unayo nayiphi na ii-smartphones zeSamsung, okanye iimodeli kamva, endineenkcukacha ezingezantsi, ungawusebenzisa lo msebenzi:
I-Samsung Galaxy A8s
I-Samsung Galaxy A30s
I-Samsung Galaxy A50s
I-Samsung Galaxy A51 5G
I-Samsung Galaxy A70s
I-Samsung Galaxy A71 5G
I-Samsung Galaxy A90s
I-Samsung Galaxy A90 5G
I-Galaxy S9 kunye neNqaku le-9
I-Galaxy S10 kunye neNqaku le-10
I-Galaxy S20 kunye neNqaku le-20
I-Galaxy Z Fold kunye no-Z Flip kuluhlu
Kuya kufuneka sifake isicelo seFowuni yakho yokuHamba (ihlala ifakwa ngokwendalo), vula useto lwesicelo Ifowuni yakho kwiWindows kwaye uqhagamshele zombini izixhobo.
Ukuba awunayo i-smartphone ye-Samsung ungasebenzisa esi sicelo kwi fikelela kumxholo okhoyo kwi-smartphoneNokuba yimiyalezo, iifoto, iividiyo kunye nokwenza iifowuni.
Umhlobo wakho wefowuni-Uqhagamshelo lweWindows
Isisombululo esinomdla kakhulu xa kuziwa ekubonakaliseni umxholo wesikrini se-smartphone yethu kwi-PC, kwiWindows okanye kwi-MacOS, yi-5KPlayer, isicelo ngokupheleleyo simahla que Ayifuni ukufaka nayiphi na isoftware kwisixhobo esiphathwayo.
Esi sicelo ikwangumdlali wevidiyo, ohambelana nazo zonke iifomathi ezisetyenziswa kakhulu namhlanje, kubandakanya iMKV. Ikwasivumela ukuba sihambelane ne-DLNA, isebenza ngaphandle kwentambo kwinethiwekhi ye-Wi-Fi kwaye, ngokungathi ayonelanga, ikwasivumela ukuba sikhuphele iividiyo kwiYouTube, Dailymotion, Vimeo ...
Ukuba into oyifunayo kukuzinza kunye nokuthembeka xa ujonga iselfowuni yakho kwi-PC, ngaphandle komenzi, esinye sezona zisombululo zilungileyo zokuhlawula sifumaneka kwisicelo se-AirServer, isicelo esingadingi ukuba sifake nasiphi na isicelo kwi-smartphone, thina Kufuneka nje faka usetyenziso kwiPC kwiVenkile kaMicrosoft nakwiMac kwiVenkile yeApple yeMac.
Esi sicelo sisivumela ukuba siphindaphinde umxholo wescreen se-smartphone yethu kwikhompyuter, sisenza isicelo esifanelekileyo sokurekhoda imidlalo yethu, ukwenza izifundo, bona umxholo we-smartphone yethu kwiscreen esikhudlwana...
Nangona kunjalo Isicelo sihlawulwe, singayisebenzisa kangangeentsuku ezingama-30 simahla, ngaphezulu kwexesha elaneleyo lokuvavanya ukuba kufanelekile na ukuyihlawulela. Ukuba ufuna ukusebenzisa oku kusebenza rhoqo, phantse i-euro ezingama-40 zibiza yona, uya kuyibhatala ngokukhawuleza ngexesha oligcinayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Izicelo ezisi-8 zasimahla zokujonga iselfowuni yakho kwiPC yakho
Iifowuni ezili-10 eziphezulu zokuSebenza ngo-Epreli 2021
Uhlalutyo lweXiaomi POCO M3: ngaba kufanelekile ngeenkcukacha zayo?